सरकारी खर्चमा मेयर शाक्य श्रीमतीसहित अमेरिका भ्रमणमा ! – www.agnijwala.com
सरकारी खर्चमा मेयर शाक्य श्रीमतीसहित अमेरिका भ्रमणमा !
काठमाडौ । सरकारले विदेश भ्रमणमा कर्मचारीलाई नियन्त्रण गरेपनि जनप्रतिनिधी भने विना रोकतोक श्रीमती सहित विदेश भ्रमणमा रमाउन थालेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य सरकारी खर्चमा श्रीमती सहित अमेरिका पुगेका छन् । काठमाडौ महानगरपालिकामा मेयरले काम नगरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका शाक्य सडकभर फोहोरको डंगुर छाडेर पत्नी सुचिता शाक्यसहित अमेरिका लागेका हुन् । उनको भ्रमण टोलीमा ९ सदस्य छन् । उनको १० दिने भ्रमणतालिका छ ।
सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न कडाइ गरेको बताउँदै आए पनि सरकारले सामान्य अवलोकन भ्रमणमा मेयरलाई श्रीमतीसहित लिएर जान भने स्वीकृति दिएको छ । सरकारले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्न ‘वैदेशिक भ्रमण निर्दे्शिका २०७४’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, व्यवहारमा कान्र्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अवलोकन भ्रमण भन्दै मेयर शाक्य जम्बो टोलीसहित श्रीमती लिएर अमेरिका गएकोमा महानगरपालिका भित्रै असन्तुष्टि सुरु भएको छ । उपत्यकाका विकासससम्बन्धी काममा चासो नदिएको, फोहोर उठाउन नसकेकोलगायतका विषयमा मेयर शाक्य आलोचित छन् ।